Yazi-Indlela Factory - China Yazini-Indlela Abakhiqizi, Abanikezeli
usekelo lwe-imeyili 021-20920839
Call Ukusekela sales@nofuelpower.com
Kungani badinga ukuvikelwa motor wesifunda amadlambi MPCB
Kuyini: Magnetic motor wesifunda amadlambi Lezi amadlambi wesifunda ukuvikela isitshalo avela ezifundeni ezingu dlala ngaphakathi kwemikhawulo kuphulwa umthamo wabo wokusebenza futhi esebenzisa trigger kazibuthe (umusho owodwa ngamunye). Magnetic wesifunda kuphulwa yikho konke-pole kusukela ekuqaleni: kwesisodwa inhlamvu kazibuthe ngeke kanyekanye ...
NEMA VS IEC: iliphi?
Njengoba ngoba ziziningi kangaka contactors kagesi kanye straters ukukhetha, ungase ukwazi izinzuzo nezingozi-IEC vs amadivayisi NEMA esinesilinganiso. Ake Nofuel amandla ukuchaza mayelana ezahlukene izinhlangano nezindinganiso ezimbili futhi okungenza ukuba umuntu ivumelane isicelo sakho ehlosiwe engcono! Kuyini NEMA ...
HVAC R ukulawula umshini izixazululo
Esinokwethenjelwa, eyonga amandla HVAC R * izinhlelo bayigugu, izingxenye ephezulu izimfuno ukuklanywa, ukwakhiwa, kanye nokusebenza izakhiwo yezimboni futhi commercial - futhi induduzo elikhulu abebehlala zabo. Ngakho-ke, kungcono kudzingeke mbamba kutsi Original Izinsiza kusebenza Man ...
Indlela ukhethe ezishisayo sindisa edluliselwe, sibekandzaba ngokulungisa
Thermal sindisa udlulisela amadivayisi zokuzivikela ezisetshenziswa sokuvikelwa sindisa izinjini kagesi, contactors noma ezinye izinto zikagesi neze izifunda kagesi. Ngo ukusebenza langempela motor, ezifana ukudonsa umshini ukukhiqizwa ukusebenza, uma umshini angaphilile noma wesifunda kuyinto ab ...
Indlela Ukukhethwa Miniature Circuit Breaker
Nendlela yokukhetha-IEC contactor
1.What kuyinto-IEC contactor? I-IEC contactor uhlobo othomathikhi usuke apharathasi esebenzisa ukusebenza yensimbi kagesi ngokuvumelana isignali okufakwayo angaphandle, futhi njalo uxhuma noma iyanqamula AC DC wesifunda main futhi ezinkulu control umthamo wesifunda. Ikakhulu esetshenziselwa controllin ...
Indlela Isakhiwo Motor ukuziqalela
Indlela contactor kagesi elawula uhlelo motor kagesi?
Electric imoto ukushaja isimiso
The Electric ukushaja phuzu akufane umsebenzi umkhumbi ngaphakathi esiteshini igesi. It ingalungiswa phansi noma udonga, efakwe ezakhiweni zomphakathi (izakhiwo zomphakathi, zezitolo, umphakathi zokupaka, njll) kanye yokuhlala zokupaka noma iziteshi ukushaja. Kungaba zisekelwe differe ...
Direct On Line (Dol) Motor yokuqalisa